आइसीसी विश्वकप क्रिकेट लिग-२ : कुशल र रोहितको अर्धशतकमा नेपालले अमेरिकालाई हरायो - हिमाल दैनिक
आइसीसी विश्वकप क्रिकेट लिग-२ : कुशल र रोहितको अर्धशतकमा नेपालले अमेरिकालाई हरायो
२९ भाद्र २०७८, मंगलवार ०८:३३
अमेरिकाले दिएको २३१ रनको लक्ष्य नेपालले ६ बल बाँकी छँदै ५ विकेट गुमाएर पुरा गर्‍यो।
रोहितले अर्धशतकसहित ६२ रन बनाए । ८७ बल खेलेका रोहितले ३ छक्का र २ चौका प्रहार गरे । नेपालका लागि विकेट किपर तथा ब्याटसम्यान विनोद भण्डारीले ३७, आसिफ शेषले २३ र ज्ञानेन्द्र मल्लले १७ रन बनाए । नेपालका कुशल मल्ल १ रन बनाएर आउट भए भने करण केसी १ रनमा अभिजित रहे।
नेपालका लागि सन्दीप लामिछाने, सुशन भारी र विक्रम सोवले सर्वाधिक २–२ विकेट लिए । १० ओभर बलिङ गरेका भारीले ३१ रन खर्चिएर २ विकेट लिए । यस्तै १० ओभर बलिङ गरेका सन्दीपले २ मेडन राख्दै ३५ रन खर्चिए ।
जितसँगै नेपालले ५ खेलबाट ३ जित र २ हार समित ६ अंक बनाएको छ।
ओमान शृङ्खला आगामी असोज ४ गतेसम्म सञ्चालन हुने छ । त्रिकोणात्मक सिरिजमा नेपालले ओमान र अमेरिकासँग दुई–दुई खेल खेल्ने छ ।
आइसिसी विश्वकप क्रिकेट लिग–२ अन्तर्गत ओमान र अमेरिकासितको त्रिकोणात्मक एकदिवसीय सिरिज अघि नेपालले यही भदौ २० र २३ गते ओमानमा पपुवा न्यूगिनीसित दुई एक दिवसीय खेल खेलेको थियो। नेपाल दुवै खेलमा विजयी भएको थियो ।
पाँचौँ खेलमा नेपालले अमेरिकालाई हराउँदै ६ अङ्क जोडेको छ । नेपाल आफ्नो समूहको अङ्क तालिकाको छैटौँ स्थानमा छ । यस्तै ओमान १० खेलमध्ये आठमा जित र दुईमा हार व्यहोर्दै १६ अङ्कसहित शीर्षस्थानमा छ ।
अमेरिका १३ खेलमा ६ खेलमा जित र सातमा हारसहित १२ अङ्क जोड्दै दोस्रो स्थानमा छ । स्कटल्याण्ड आठ खेलमा चारमा जित र तीनमा हारका साथ नौ अङ्क जोड्दै तेस्रो स्थानमा छ ।
यसैगरी युएई सात खेलमा तीनमा जित र तीनमा हारका साथ सात अङ्क जोड्दै पाँचौँ स्थानमा छ । युएईले खेलेको एउटा खेल रद्द भएको थियो ।
पपुवा न्यूगिनी हालसम्म खेलेका आठवटै खेलमा पराजित भएको छ । पपुवा न्यूगिनी अङ्कविहीन बन्दै लिग–२ को पुछारमा छ । लिग–२ अन्तर्गत सन् २०२३ सम्म नेपालसहित उक्त समूहका सातवटै देश प्रत्येकले ३६ एकदिवसीय खेल खेल्ने छन् ।
अघिल्लोएकदिवसीय क्रिकेटमा कुशल भुर्तेलकाे पहिलाे अर्धशतक
पछिल्लोबस र ट्रक एकआपसमा ठोक्किँदा तीन जनाको मृत्यु, २४ घाइते
अपराजित यात्रा कायम गर्दै नेपोली लिगको शिर्ष स्थानमा
Categories Select Category#Covid19Update (2,612)English (12)Uncategorized (28)अखबारबाट (36)अदालत (63)अन्तर्वार्ता (25)अर्थतन्त्र (862)आइपिएल (45)इङ्ग्लिस प्रिमियर लिग (5)एभरेष्ट प्रिमियर लिग (ईपीएल) (1)ओलम्पिक (3)कर्णाली प्रदेश (55)कांग्रेसको १४औं महाधिवेशन विशेषः (28)कोपा अमेरिका (10)क्राइम (35)क्रिकेट (158)खेलकुद (797)गण्डकी प्रदेश (365)घुमफिर (9)च्याम्पियन्स लिग (6)जनता समाजवादी पार्टी (95)जनमत पार्टी (1)जर्मन बुन्डेस लिगा (2)दुर्घटना (22)निर्वाचन बिशेष (122)नेकपा (एकीकृत समाजवादी) पार्टी (19)नेकपा एमाले (306)नेकपा क्रान्तिकारी माओवादी (1)नेकपा माओवादी केन्द्र (89)नेत्रविक्रम चन्द नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (4)नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (499)नेपाल सुपर लिग (14)नेपाली कांग्रेस पार्टी (486)प्रतिनिधिसभा (43)प्रदेश न. १ (142)प्रदेश न. २ (183)प्रबिधि (9)प्रवास (755)फुटबल (215)फ्रेन्च लिग (2)बजेट (28)बलिउड (41)बाग्मती प्रदेश (346)ब्लग (2)भलिबल (5)मनोरन्जन-कला (160)मौसम (54)युरोकप-२०२० (43)राजनीति (3,666)राष्ट्रिय जनमोर्चा (11)राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (46)राष्ट्रिय सभा (10)लुम्बिनी प्रदेश (153)लोसपा(लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी नेपाल) (4)विचार (107)विवेकशिल साझा पार्टी (4)विशेष (1,779)विश्वकप छनोट (9)शिक्षा (26)समाज (2,862)सम्पादकीय (2)संसद विशेष (783)संस्कृति-रितिरिवाज (40)सातौं संविधान दिवस (14)साफ च्याम्पियनशिप (1)सिरिए ए (5)सुदुरपश्चिम प्रदेश (84)स्पेनिस ला लिगा (6)स्वास्थ्य (22)हलिउड (1)
Archives Select Month September 2021 (330) August 2021 (201) July 2021 (203) June 2021 (337) May 2021 (467) April 2021 (440) March 2021 (390) February 2021 (234) January 2021 (234) December 2020 (329) November 2020 (251) October 2020 (431) September 2020 (672) August 2020 (551) July 2020 (562) June 2020 (674) May 2020 (620) April 2020 (508) March 2020 (470) February 2020 (384) January 2020 (534) December 2019 (379) November 2019 (492) October 2019 (433) September 2019 (454) August 2019 (762) July 2019 (440) June 2019 (193) May 2019 (20)